पटुकामा बिँडीजस्ता नोट- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
पटुकामा बिँडीजस्ता नोट
असार ७, २०७६ रमेश भुसाल
आमाले एक साँझ भन्नुभो, मामाघर जानी हो भोलि ? दंग थिएँ म  । २०४६ सालको त्यो दिन घर छाडेर मामाघर हिँडेका हामी त्यसपछि कहिल्यै घर फर्केनौं  ।
पर्वत जिल्लाको दक्षिणी भेगको गाउँ होस्रांग्दीबाट टोड्केको उकालो काटेर भीरपानीको ओरालो झर्‍यौं । त्यो रिंगटा लाग्ने भीर काटेपछि अलि समथर गाउँ आउँछ, त्यसैको नाम हो बेउलीबास । आमा भने बेउलीबासबाट बेहुली भएर लेकको गाउँ होस्रांग्दी पुग्नुभएको थियो ।
कालीगण्डकीमा हेलिएका बाको लास पाइएको थिएन । शिक्षक श्रीमान् एक्कासि मरे । बा गाउँटोलमै असल, भेगमै असल हुनुहुन्थ्यो भन्छन् चिन्नेहरू । सदरमुकाम कुस्मा हिँडेका बालाई २०३९ साल असार ७ गतेको भेलले लग्यो । उहाँले आत्महत्या गर्नुभो । प्रजातान्त्रिक आान्दोलनले उग्ररूप लिँदै थियो । निकै मिल्ने साथीलाई कसैले पिटेर मार्‍यो । राति कालीगण्डकीमा फालिदिए रे ! अब तँलाई पनि मार्छन् भनेर कसैले सुनाइदिएछ । कुस्मा बजारमा कतै साथी भेटिएनन् सायद । फोन–मोबाइल हुने कुरा भएन । बा अरूले पिटेर मर्नभन्दा आफैं मर्छु भनेर हामफाल्नुभो भन्छन् देख्नेहरू । मनमा के थियो कसले जान्यो र ? मरे भनेका साथीलाई राति नै पोखरा लगेर बचाएछन् । उनी दुई हप्तापछि जिउँदै फर्के । बा फर्किनुभएन ।
बेहुली भएको डेढ वर्षमै विधवा हुनुभो आमा । बा असारमा बित्नुभो, म कात्तिकमा जन्में । बा मरेको ७ वर्ष त पुग्दै थियो । १७ वर्षमा विधवा अनि गर्भे टुहुराकी आमा, त्यसैमाथि असहयोगी परिवार । सहिनसक्नु भएहोला । टुहुरो भनेर होला घरमा आउने पाहुनले मलाई दुई–पाँच रुपैयाँ दिन्थे । आमाले दुई वर्षअघि काठमान्डुमा आफ्नी दिदीलाई भेट्न आउँदा माटाको खुत्रुकी लगिदिनुभएको थियो । त्यसैमा मैले पैसा जम्मा गर्थें । खुत्रुकी झराम्म फुटायौं हामीले । त्यही रकम बोकेर आमा र म बेउलीबास लाग्यौं, मामाघर ।
देश बलिरहेको थियो रे । २०४६ साल अन्तिम–अन्तिमतिरको समय थियो त्यो । प्रजातन्त्र ल्याउने भनेर देशैभरि नजाने कति मान्छेहरूले रातभरि रणनीति बनाउँदै थिए होलान् । हामी भने रातभरि काठमान्डु जाने तयारीमा रहेछौं । ‘उठ बाबु जानी बेला भो,’ आमाले झिसमिसेमै झक्झक्याउनुभयो ।‘कहाँ ?’ मैले सोधें ।
‘काठमान्डु,’ आमाले उत्तर फर्काउनुभयो । ‘घर नजानी अब काठमान्डु जानी ।’
कहाँ हो त्यो काठमान्डु मलाई थाहा थिएन । त्योभन्दा अघि गाडी चढेको पनि सम्झना छैन । सबेरै ढ्याउरी (मट्टीतेल हालेर बाल्ने बत्ती) को उज्यालोमा हजुरआमा यता र उता गर्दै हुनुहुन्थ्यो । म उठेँ । अँगेनामा पाकिरहेको घिउ हालेको भात (खाजा) को बास्ना मगमग आइरहेको थियो । हजुरआमाको अनुहार मलिन थियो । घरबाट आफ्ना लगाउने कपडाबाहेक केही बोकेका थिएनौं हामीले । अरू हाम्रो के नै पो थियो र । गोठका भैंसीबाख्रा बोकेर हिँड्ने कुरा भएन, आम्दानी केही थिएन ।
पेटभरि खाजा खायौं । जब हिँड्ने बेला भयो हजुरआमाका आँखाबाट एक्कासि आँसुका ढिक्का झरे । आमा पनि रुनुभो । मलाई थाहा भएन किन रुनुपरेको हो । मलाई कहाँ थाहा थियो र यो काठमान्डु सहरमा कति सकस हुन्छ बाँच्न भनेर । काठमान्डुमा आएपछि वर्षौं झरेका आफ्ना आँसुको अहिले हिसाबकिताब गर्न मन लाग्दैन । सोल्टिमोड, कालीमाटी र टंकेश्वरका होटलमा हजारौं थाल र गिलास माझेको हिजैजस्तो लाग्छ ।
केही वर्षपछि हजुरआमा हामीलाई भेट्न काठमान्डु आउनुभयो । यहाँ सुख थिएन उहाँले देख्नुभो । ‘मेरो बाबु, कुँडेभरि दूध हेर्दै तँलाई सम्झिन्छु । मोही पारेर घिउ निकाल्दा पनि अलिकति तँलाई दिन पाएहुन्थ्योजस्तो हुन्छ । तर तिमीहरू यहाँ छौ ।
क्यारम !’ हजुरआमाले हरेक भेटमा भन्ने गरेका वाक्य थिए ती । मान्छेहरू सधैं भन्थे टुहुराको दिन आउँछ । हामी त्यो दिन पर्खेर बसेका थियौं । ढिलोचाँडो हामीले जुठा, थाल गिलासबाट मुक्ति पायौं । सायद यही नै होला दिन आएको ।
मामा पल्टनिया लाहुरे । हरेक पटक छुट्टीमा आउँदा ढोगेर दिने रकम नै हजुरआमाको मुख्य आयस्रोत थियो । कान्छी छोरीलाई बज्रपात पर्‍यो । आँखा कहिल्यै ओभाना भएनन् । ‘के गरम् र छोरी तिमीलाई त्यस्तो पर्‍यो,’ भन्दै हजुरआमा कति रुनुभो, त्यसको हिसाबकिताब छैन । नीलो पटुकाभित्र बेरिएर बिँडीजस्ता भएका सय र ५ सयका केही आईसी नोट फुकाउँदै आमालाई दिनुभयो, ‘यही लिएर जाऊ छोरी अरू के भनम् र ! यो छोराको ख्याल राखे ।’ हजुरआमा झन् भक्कानिएर रुनुभो । हामी झोला बोकेर हिँड्यौं । हजुरआमा पछिपछि गोठ पल्तिरसम्म आउनुभो । आँसु निरन्तर झरेकै थियो । हामीले डाँडो काट्यौं ।
दिनभरि हिँडेपछि स्याङ्जाको वालिङ बजार पुगिन्थ्यो । त्यहाँबाट नाइटबस चढेर रातभरिमा काठमान्डु । अमेरिकाभन्दा पनि टाढा थियो काठमान्डु । अलि ढिलो भयो भने बस छुट्छ । एक रात वालिङमै काट्नुपर्छ । आफ्ना कोही छैनन्, होटलमा बसे पैसा लाग्छ । खुत्रुके र हजुरआमाका पटुकाबाट निस्केका केही रकमले काठमान्डु पुगेर मात्रै भएन, अरू केही समय पालिनु पनि त पर्थ्यो । बाएँ खोलो २२ पटक तरेर छेडुवा कुलो काट्ने बेला पारिपट्टि एउटा ट्यांकर देखियो । बुटवलबाट स्याङ्जा आउँदै गरेको । मैले सोधें, ‘के हो आमा ?’
आमाले उत्तर दिनुभो, ‘गाडी हो । त्यसैमा चढेर जानी हो काठमान्डु, चाँडै हिँड् ।’
अहो, गाडी त्यस्तो पो हुँदोरैछ । मेरो मानसपटलमा बसेको पहिलो गाडी त्यही ट्यांकर हो । अरू धेरै सम्झना छैन तर बिहानको झिसमिसेमा थानकोटबाट देखिएको झिलिमिली सहर आज पनि आँखामा झलझली आउँछ । घामको उज्यालो झरिनसकेको अनि रातको अँध्यारो फाटिनसकेको त्यो बिहान काठमान्डु बिस्तारै उठ्दै थियो । अँध्यारो गाउँबाट आएको मलाई अलिअलि बेलेका बत्ती पनि झिलिमिली हुने नै भए । हामी सोल्टीमोडमा झर्‍यौं । आमाका दिदीभिनाजुको होटलमा पस्यौं । धन्न कोही त थियो यो सहरमा । नभए कसरी पो आउँथ्यौं र ! संघर्ष गर्दै गरेका ठूलाबा ठूलीआमाले चरम अभावका बीच आफ्नै छोराजस्तै गरी मलाई सहयोग नगरेको भए हामी कहाँ बाँच्थ्यौं होला ? मैले स्कुल कसरी पढ्थें होला ?
काठमान्डु बलेको थियो । हरेक दिनजसो कर्फ्यु लाग्थ्यो । मानिसहरूले ठाउँठाउँमा आगो लगाउँथे । सोल्टीमोडमा रहेको प्रहरी चौकीमा गोली हाने रे भन्थे । आवाज हामीले पनि सुनेको हो । को हो मर्‍यो रे भन्थे । स्कुल पुग्दा नपुग्दै कर्फ्यु लाग्ने घोषणा हुन्थ्यो । हतारहतार आमा लिन आउनुहुन्थ्यो । कहिलेकाही घण्टौं स्कुलमा थुनिनु पनि पर्थ्यो । हजुरआमाको मन झन्झन् पोल्थ्यो होला । अहिलेजस्तो फोन थिएन । इन्टरनेटको कुरै भएन । भएकै भए पनि हामीसँग पैसा पनि त थिएन । आज इन्टरनेट भए पनि पैसा नहुनेहरूका लागि त वाईफाई टाढैको कुरा हो नी ।
देशमा प्रजातन्त्र आयो । खुसियाली छायो । तर हाम्रा सुख दिन आएनन् । किराना पसल चलेन । चिया होटल पनि चलाउन सकिएन । आमाले एक दिन भन्नुभो— म अब विदेश जान्छु, बाबु । २०५२ सालतिरको कुरा हो । त्यही खुसी ल्याएको प्रजातन्त्रले केही गरेन भनेर माओवादीहरूले त्योभन्दा धेरै खुसी ल्याउने संघर्षको तयारी गर्दै रहेछन् । म त्यति बुझ्दैनथें । हामी भने बाँच्नेमै संघर्षरत थियौं । ‘मेरी साथी कुबेतमा छन्, राम्रो जागिर पाइन्छ अरे, म दुई वर्षमा फर्कन्छु, पैसा कमाएर आएपछि सजिलो होला नि,’ भनेर आमा कुबेत जानुभो । मैले एयरपोर्टमा जहाज चढ्नेका आफन्तहरूले हेर्न पाउने छतमा बसेर आमा चढेको जहाज नउडेसम्म हेरिरहें । त्यो पूर्व गयो कि पश्चिम मैले थाहा पाइनँ । जहाज उड्यो । आकाशमा हरायो । म भक्कानिएर रोएँ । अब मेरो कोही छैन । भएकी तिनै एउटी आमा थिइन् भन्दै मेरो मन कति रोयो मलाई मात्रै थाहा छ । ठूलाबाले भन्नुभो, ‘चिन्ता नगर बाबु, हामी छम् ।’ उहाँहरूसँगै बसेर मैले ३ वर्ष बिताएँ ।
हरेक वर्ष जाडो बिदामा म पर्वत जान्थें तर एकतर्फी बाटो खर्च लिएर । फर्कने बेला कसैले मलाई बस चढ्ने भाडा छ कि छैन भनेर सोध्दैनथ्यो । पढे–लेखेका काका, ठूलाबाहरू थिए । सबै स्कुले मास्टर थिए । तर पढेर मात्रै मान्छे ज्ञानी हुने कहाँ हो रैछ र ! अक्षर पढ्न जान्नेहरू शिक्षित मात्रै हुँदारहेछन् । ती मान्छे पो ज्ञानी हुने जसले अक्षरले बनेका शब्दको अर्थ बुझ्छन् । वाक्यका भाव बुझ्छन् र जीवनमा त्यसैलाई प्रयोग गर्छन् । दयामाया देखाउँछन् । मेरा बाहरू अक्षर पढ्न जानेका तर बुझ्न नजानेका शिक्षित मात्र थिए । कहिल्यै मेरो एक महिनाको स्कुल फिस तिरिदिन दया जागेन । परका भए पनि, नपढेका भए पनि आमाका भिनाजुले मलाई कहिल्यै अर्को भन्नुभएन । असल हुन पढ्नैपर्ने होइन रैछ ! पढेर ज्ञानी भइँदो रैनछ भनेर त्यसै बेलादेखि थाहा पाएको हुँ ।
हरेक छुट्टीमा साथीभाइसँग खेल्न पाउने भएकाले म मामाघर एक रात बसेर लेकतिर लागिहाल्थें । उस्तै उमेरका दाइभाइ थिए । खेल्न रमाइलो हुन्थ्यो । आज एक दिन त बस् न बाबुभन्दा पनि पनि नाइनास्ती गरेर फर्किंदा बस्छु है हजुरआमा भन्थें । अहिले थकथक लाग्छ । बेउलीबासको गाउँ मास्तिर घोप्टे भीरपानीको भीर नकटाई हजुरआमाको मन शान्त हुँदैनथ्यो । दम बढे पनि हजुरआमा सँगै आउनुहुन्थ्यो । पहिलो चौपारीबाट भीर नकाटेसम्मको दृश्य देखिन्थ्यो, त्यसैले हजुरआमा चौपारीमा बसेर हेर्नुहुन्थ्यो र म भीर काटेर डाँडामा पुगेपछि ‘हजुरआमा पुगें है जानुस्’ भनेर चिच्याउँथे । डाँडै थर्किन्थ्यो । हजुरआमा रुँदै झर्नुहुन्थ्यो ।
हरेक वर्ष काठमान्डु फर्किने बेला हजुरआमाले आफ्नो पटुकाभित्रबाट केही आईसी नोट निकाल्नुहुन्थ्यो । त्यो नै मेरो काठमान्डु फर्कने बाटो खर्च हुन्थ्यो । सधैं रेडियो नेपालमा बालक हराएको सूचना आउँथ्यो । ‘सधैं कान ठाडो पारेर रेडियोमा केटाकेटी हराए भन्ने सम्चार सुन्छु । तँ हो कि भनेर कति चिन्ता लाउँछ । जहाँ पायो त्यहीं नगए है बाबु,’ हजुरआमाले सधैं भन्नुहुन्थ्यो । काठमान्डुमा हजुरआमा पो हराउनुहुन्थ्यो, म त जान्ने भइसकेको थिएँ । गल्लीगल्ली चहार्न सक्ने भइसकेको थिएँ । पछि त्यही रेडियोमा मेरो आवाज बज्न थाल्यो । रेडियोमा जागिरे भएँ म । ‘अचाल त तँ बोलेको सुन्छु रेडियामा,’ हजुरआमाले एक पटक हाँस्दै भनेको पनि एक दशक कट्यो ।
म संसार चहार्न हिँडें । अवसर खोज्न हिँडें । घरजम गर्नतिर लागें । तर हजुरआमाले बिस्तारै बिर्सन थाल्नुभो । उमेर बढ्दै जाँदा बिर्सने रोग लाग्यो । केही वर्षअघि मामा मधेस झर्नुभो, हजुरआमालाई पनि बोकेर । रोगले च्याप्दै लग्यो तर प्राण गएन । केही महिनाअघि तीन वर्षकी छोरीलाई बोकेर हामी भेट्न गएका थियौं । तर न मलाई चिन्नुभो न त छोरीलाई । एक मन त लाग्यो अब देहत्याग गरे पनि हुने । बिर्सने, केही नखाइदिने, दिसापिसाब ओछ्यानमै । ९ दशक काट्नै लागेको बूढो शरीर, आफैंलाई बोझ भएजस्तो । अघिल्लो हप्ता मामाले फोन गर्नुभो आमालाई अब पठाउनुस् भान्जा । आमा हानिएर जानुभो । आमालाई नै पर्खेजसरी भेटेको केही घण्टामै त्यसै रात हजुरआमाले देहत्याग गर्नुभो । अन्ततः ४ वर्षको खाटको बसाइको अन्त भयो । नारायणीमा बिलाउनुभो हजुरआमा ।
त्यो रात, धन्न हामी काठमान्डु आयौं । नभए आज म के हुँदो हुँ ? संसार कहाँ देख्दो हुँ ? ती केही आईसी नोटले हामीलाई संसार देखाए । त्यसैको आँटले हामीलाई बस चढायो । यो पापी खाल्टोमा कहिले भोकै पेट त कहिले आधा पेट । कहिले किराना पसल त कहिले चिया दोकान । कहिले तरकारी पसल त कहिले भात होटल गर्दै वर्षौं बिते । हजुरआमा, म आफैं भीर काट्न सक्ने भएको छु । आफैंले कमाएर खान सक्ने भएको छु । बिहे गरेर छोरी पाल्न सक्ने भइसकेको छु । त्यो पटुकाको आईसी नोट नभए पनि बस चढ्न सक्ने भएको छु । जाने त सबै उतै हो तर तपाईंका सम्झनाले सताइरहेनछन् । धन्यवाद, हजुरआमा । तपाईंको स्वर्गमा बास होस् ।
प्रकाशित : असार ७, २०७६ १०:५१
डर के पनि छ भने पानी परेर थप केही खेल रद्द भयो भने सेमिफाइनल पुग्ने समीकरणमा सबैभन्दा हाबी पानी नै हुनेछ, टिमको प्रदर्शन होइन । प्रतियोगिताको अन्त्यमा विश्वकप कसले जित्यो भन्दा वर्षाले भन्दा मज्जा त आएन नै !
असार ७, २०७६ हिमेश
पानी पर्दै गर्छ, क्रिकेट चल्दै गर्छ भनेर कसैले भन्न सकेका छैनन् । यस्तो हुँदो हो भने कि त बलिङ गर्ने टिमलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो कि ब्याटिङ गर्ने टिमलाई ?
क्रिकेटको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो, बलिङ र ब्याटिङमा सन्तुलन हुनुपर्छ । फेरि पिच आफैंले पनि बेसरी झिज्यो भने गर्ने व्यवहार कस्तो हुँदो हो, त्यसबारे पनि भन्न सकिन्न । यो सबै हावादारी कल्पना किन भन्दा वर्षाले सबैभन्दा कुनै एक खेललाई बढी सताएको छ भने त्यो क्रिकेट नै हो । क्रिकेटलाई सधैं एउटा डरले सताइरहन्छ, पानी परेपछि के गर्ने ? रमाइलो के भने क्रिकेट खेलकै जन्म त्यो देशमा भएको छ, जहाँ अरूतिरभन्दा बढी पानी पर्छ ।
भनिन्छ, इंग्ल्यान्डमा कति बेला पानी पर्छ र कहाँनिर पानी पर्छ, टुंगो नै हुन्न । त्यहाँको मौसम साह्रै बदमास छ, त्यसैले त कुनै बेला कमेन्ट्री गर्दै नवजोत सिंह सिद्धु भन्थे, “इंग्ल्यान्डको ‘मौसम’ र श्रीमतीको ‘मुड’ को कहिल्यै भर हुन्न ।” अहिले यो सबै चर्चा किन भन्दा क्रिकेटको वान–डे विश्वकप चलिरहेको छ र यो संयोगले इंग्ल्यान्डमै भइरहेको छ । यति बेला विश्वकपको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनेको छ, वर्षा । अहिले लिग चरणका खेल भइरहेका छन् र त्यसको तीन खेल वर्षाकै कारण कुनै पनि बल नफ्याँकेर रद्द भएको छ । अर्को एउटा खेलमा केही क्षण खेल त भयो, तर त्यो पूरा हुन सकेन् ।
इतिहासले के भन्छ भने यति धेरै खेल रद्द भएको यो नै पहिलो विश्वकप हो । सन् १९९२ र २००३ का विश्वकपमा दुई दुई खेल मात्र वर्षाले हुन सकेका थिएनन् । खास भन्ने हो भने यसपल्टको विश्वकपको मज्जा नै किरकिरा सावित भइरहेको छ । दर्शकलाई पनि ठूलै घाटा छ । एउटा खेल हेर्न भनेर दर्शकले वर्षौंदेखि योजना बनाउँछन्, लामो न लामो यात्रा गर्छन्, उत्तिकै खर्च पनि गर्छन् ।
तर मैदानमा पुग्दा पानी परेपछि खेल हुन्न । फेरि जुन टिमले वर्षाका कारण खेल गुमायो, त्यसलाई चर्को घाटा पर्ने भयो नै । लिग चरणमा अझै धेरै खेल बाँकी छन् । डर छ, कतै यस्तै केही खेलमा पानी पर्‍यो भने ? डर के पनि छ भने पानी परेर थप केही खेल रद्द भयो भने सेमिफाइनल पुग्ने समीकरणमा सबैभन्दा हाबी पानी नै हुनेछ, टिमको प्रदर्शन होइन । प्रतियोगिताको अन्त्यमा विश्वकप कसले जित्यो भन्दा वर्षाले भन्दा मज्जा त आएन नै !
यसपल्ट वर्षाको मुद्दा किन पनि बढी बहसको विषय भएको भने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले यसपल्ट रिभर्ज डे राखेको छैन । त्यसो भनेको आज पानी परेर खेल भएन भने त्यही खेल भोलि गर्ने । आईसीसीले किन रिजर्भ डे राखेन होला त ? भन्नेहरू के भन्छन् भने आईसीसी लोभी छ । उसको पैसा कमाउनमै बढी ध्यान जान्छ । हुन पनि, यसपल्टको विश्वकप एक महिना होइन, ४५ दिन चल्छ । एक प्रकारले धेरै लामो छ, यो अवधि । अनि लगभग दिनको एक खेल । दुई खेल विरलै केही दिनमा मात्र छन् । एकै दिन धेरै खेल राख्यो भने टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न गाह्रो हुन्छ, गाह्रो भयो भने कमाइ कम हुन्छ, आईसीसीको विचार यस्तै–यस्तै छ ।
पानी परेपछि खेल गुमाउनेमा पर्छ, बंगलादेश । उसलाई लागेको छ, वर्षाले खेल हुन नसकेपछि उसलाई ठूलै घाटा लागेको छ । त्यसैले बंगलादेशी प्रशिक्षक स्टिभ रोड्सले पनि भनिहाले, ‘मान्छे चन्द्रमा पुग्न सक्छ, तर रिजर्भ डे राख्न सक्दैन ।’ सन् १९९९ मै इंग्ल्यान्डमा विश्वकप हुँदा रिभर्ज डे थियो । यसपल्ट खालि सेमिफाइनल र फाइनलका लागि मात्र रिभर्ज डे छन् । वर्षाको मुद्दा चर्को बनेपछि आईसीसी खासमा ‘ब्याक फुट’ मा आएको छ । त्यसैले आईसीसीबाट स्पष्टीकरण पनि आइसकेको छ । उसका कार्यकारी प्रमुख डेबिड रिचर्डनले भनेका छन्, ‘त्यसै पनि यसपल्टको विश्वकप धेरै दिनको छ, यसबीचमा अझ रिजर्भ डे त राख्दै सकिन्न । फेरि विश्वको जुनसुकै कुनामा खेल भए पनि वर्षालाई कसरी रोक्न सकिन्छ त ?’
हुन पनि नेपाली घरेलु क्रिकेटमै पनि त्यस्ता दिन थिए, जति बेला एक त खेल नै हुन्न थियो, भए पनि पानी परिहाल्थ्यो । पानी ठूलै समस्या थियो । एकपल्ट ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा जन्मदिनको अवसर पारेर असारमा क्रिकेट प्रतियोगिता राखिएको थियो । लगभग कुनै खेल नै हुन सकेन, लगातार पानी परेपछि । केही चाटुकारको काम हुनुपर्छ, नेपालमा असारतिर क्रिकेटको प्रतियोगिता गर्ने । पानी पर्छ भनेर राम्रोसँग थाहा पाएर पनि असारमै क्रिकेट, नतिजा पूरा प्रतियोगिता नै ‘वास आउट’ ।
फेरि अहिलेको विश्वकपमै फर्कने हो भने केही महत्त्वपूर्ण खेल वर्षाले सम्भव नभएपछि के गर्ने त भनेर थरीथरीको उपाय अगाडि आएका छन् । यसको एउटा राम्रो उपाय त रिजर्भ डे नै हो । अब प्रतियोगिता नै सुरु भइसकेपछि अहिलेको विश्वकपमा यसको व्यवस्था गर्न सकिन्न । भविष्यमा अब कुनै ठूलो प्रतियोगिता आयोजना गर्न अगाडि यो ठूलो मुद्दा हुने नै छ । आखिरमा रिजर्भ डेको व्यवस्था गर्नु भनेको चन्द्रमा जानु जत्तिको जटिल र खर्चिलो त होइन ।
अनि क्रिकेट आयोजना हुने पूरा रंगशालामै छाना राख्दा कसो होला ? छानाले पानी त रोक्छ, अनि जस्तै पानी परे पनि तनाव भएन । सन् २००६ मा दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलियाबीच एउटा वान–डे यस्तै छाना भएको रंगशालामा भएको पनि थियो र त्यो स्टेडियमको नाम थियो, डकल्यान्ड्स । त्यसपछि कुनै खेल छानामुनि भएन, किनभने क्रिकेटले जुन मज्जा खुला आकाशमुनि खेल्दा प्राप्त हुन्छ, त्यो बन्द छानामा भएन । क्रिकेट छानामुनि खेल्ने खेल नै थिएन । जस्तो, बादल लागेको बेला बल अत्यधिक स्विङ हुने सम्भावना हुन्छ, त्यति बेला बलरले मौसमको फाइदा लिन सक्छ । चरक्क घाम लाग्दा स्थिति अर्कै बन्छ । एक छेउबाट सरर्र हावा बग्दा खेलले नयाँ मोड लिन्छ । छानासहितको बन्द रंगशालामा यस्तो मौसमी फाइदा कहाँ लिन सकिन्छ ? फेरि यो उत्तिकै महँगो पनि छ । अहिलेको विश्वकप ११ मैदानमा चलिरहेको छ, ती सबै मैदानमा छाना हाल्ने हो भने पूरा प्रतियोगिताको खर्च त्यही छाना राख्दैमा सकिन्छ ।
विम्बल्डन हुने लन्डनकै सेन्टर कोर्टमा पनि केही वर्ष भयो, छाना राखिएको । यो वास्तवमै कति खर्चिलो छ भने विम्बल्डनका आयोजकले अर्को दोस्रो कोर्टमा छाना हाल्न सकेका छैनन् । छाना हालेर क्रिकेट खेल्ने सम्भावना लगभग यहीं सकिन्छ । पानी परिहाल्यो भने मैदानलाई पूरै छोपेर बचाउने उपाय पनि छ र यो जताततै देख्न पनि पाइन्छ । यसले खेल रोक्नबाट त बताउन सक्दैन, तर कम्तीमा पानी रोकिएपछि फेरि खेल सुरु गर्न भने मदत गर्छ ।
निचोड के भने जति बेला क्रिकेट खेल जन्मिएको थियो, त्यति बेला नै यसको जन्मकुन्डलीमा ‘पानीले दुःख दिन्छ’ भनेर लेखेको हुनुपर्छ । जति बेलासम्म क्रिकेट हुनेछ, त्यति बेलासम्म पानी परेपछि हुने दुःख रहिरहन्छ । अबको सय वर्षपछि के हुन्छ, त्यो भन्न सकिन्न, किनभने त्यति बेला पर्न लागेको पानी रोक्ने प्रविधि पनि हुनेछ कि ? सिद्धुकै भाषामा श्रीमतीको ‘मुड’ परिवर्तन हुँदा एक खाले मज्जा पनि त छ नि, त्यही सम्झेर क्रिकेटमा पनि मज्जा लिनुपर्छ, पानी परेपछि ।